Sida AirPlay looga sameeyo macruufka illaa Android si fudud | Wararka IPhone
Inbadan oo naga mid ah waxay ka yimaadeen aaladda IOS, illaa qeybta Apple oo dhameystiran, laga soo bilaabo macruufka illaa macOS, si kastaba ha noqotee, inta badan waxaa jira qalab Apple ah oo naga baxsada, sababo dhaqaale awgood ama sababtoo ah iyagu uma ahan kuwo soo jiidasho leh sida tartanka. Waxay noqon kartaa kiiska Apple TV, oo leh qiimo xoogaa sarreeya, waxaan la kulannaa xaalad adag oo ku saabsan aaladaha Android oo ah xarun warbaahin badan oo telefishannada ah. Si kastaba ha noqotee, halkan waxaan ka jebinnaa silsiladda iswaafajinta, AirPlay inta udhaxeysa aaladaha Apple waa raaxo loo heli karo qof walba, sidaa darteed, waa inaanan ka tanaasulin AirPlay sababtoo ah waxaan leenahay aaladaha Android ee TV-gayaga ama kiniinkeena, Waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo AirPlay ka macruufka in Android si fudud.
Dacwadda aan ka faaloon doono ee aan kugu dhejin doono xaalada, waxaan leenahay labada iPhone, iPad iyo MacBook, si kastaba ha noqotee, waxaan ka maqanahay Apple TV si loo dhameystiro deegaanka Apple. Ma jiro wax ka faa iido badan AirPlay oo loo isticmaalo xarun multimedia oo guriga ah, tusaale ahaan, haddii aan hayno Apple TV oo aan ku xirnayn telefishanka oo keliya, laakiin sidoo kale Shineemada Guriga ama muusigga guriga lagu garaaco, waxaan muusigeenna ka saari karnaa iPhone-ka oo aan u aragnaa sida loogu ciyaaro aaladda codkayaga hi-fi.
Waxaas oo dhami waa eber haddii xarunteenna war-baahinta badani ay tahay Android, haddii ay tahay kiniin ay ku xidhan tahay HDMI telefishanka iyo nidaamka dhawaaqa, ama Android PC Box (sanduuqyo yaryar oo wata qalabka casriga ah ee casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone and classic connectivity'). Si kastaba ha noqotee, waxaan haysannaa bedel wanaagsan oo wanaagsan.
Waxaan ku xasuusinaynaa in AirPlay ay lamid tahay ChromeCast, taas oo ah, markaan rabno inaan ku ciyaarno waxyaabaha ku jira AirPlay, laguma ciyaaro nidaamka aan ka soo dirno, laakiin nidaamka qaata, sidaas, waxaan ku mari karnaa nidaamkeena fiidiyowga qulqulka ama Apple Music lafteeda, in markaan doorano AirPlay Xarunta Xakamaynta, amarka bixinta ayaa si fudud loo siin doonaa, laakiin ma isticmaali doonno batteriga iyo waxqabadka iPhone-keena, laakiin qalabka helitaanka. Sidaa darteed, mar aan baahinno tusaale ahaan cutub ka mid ah taxanaheena aan ugu jecel nahay AirPlay, waan sii wadi karnaa adeegsiga iPhone ujeedooyin kale inta aan ku raaxeysaneyno cutubka iyada oo aan la jarin ama la adeegsan batteriga.
1 Maxaan ubaahanahay inaan ku rakibo qalabka Android?
2 Sidee ayuu AirPlay ugu shaqeeyaa macruufka?
Maxaan ubaahanahay inaan ku rakibo qalabka Android?
Magaca dalabka Android waa «Qaataha AirPlay / DLNA", Laakiin waa inaan adkeynaa inaan ka helno laba nooc Google Play Store, nooca" LITE "oo noo ogolaanaya inaan ka soo gudbino codka macruufka ilaa Android, iyo nooca" PRO "oo noo ogolaanaya inaan kaliya la maqal maqalka fiidiyow, laakiin sidoo kale inaan sidoo kale ka sameysan karno shaashadda iPhone / iPad / Mac, sidaas darteed waxaan ku arki doonnaa shaashadda qalabkeenna waqtiga dhabta ah telefishanka aan ku xirnay aaladda Android.
Nooca LITE ee dalabka waa gebi ahaanba bilaash ah oo laga heli karo Google Play StoreTaas bedelkeeda, nooca PRO, oo ah midka aan kugula taliyo, waa kharash 5,45 €, sidoo kale laga heli karaa Google Play Store, waana inaan idhaahdaa si heer sare ah ayaa loogu talinayaa, waa u qalantaa dinaar kasta wixii ku kacaya Uma geli doono qiimeynta sida ay u fududahay ama u adag tahay in gacanta lagu dhigo noocan ah dalab bixinta oo si khiyaano ah loogu adeegsado Android.
Marka la rakibo, waxaan u tixgelineynaa Plug & Play, waxa ugu aasaasiga ah maahan in wax la habeeyo, codsigu wuxuu bilaabmi doonaa mar kasta oo aan si toos ah u daarno qalabka Android, si kastaba ha ahaatee, talo soo jeedin muhiim ah ayaa ah in aan joojino gudbinta 1080p taas oo ku jirta qaab beta ah, oo aan uga tagno gudbinta qaab qaab caadi ah, ma heli doonno tayo lumis, sababtoo ah haddii waxyaabaha la soo saarayo ay yihiin 1080p way soo saari doontaa, hase yeeshe, waxaan iska ilaalin doonnaa khalkhalka nidaamka waana shaqeyn doonaa runti si dhakhso leh oo dhakhso leh, sidoo kale haddii ay ahaan lahayd qalab Apple ku habboon.
Sidee ayuu AirPlay ugu shaqeeyaa macruufka?
Fudud, si loo baahiyo muusikada, markii aan soo galno Apple Music ama adeegga muusigga la doorbido, waxaan soo gelineynaa xarunta kontoroolka, waxaan u kuur galeynaa in agagarka AirDrop, aan heysanno AirPlay, aan riixno oo menu-ka macnaha guud uu furmayo, hadda qalabkeenna ayaa si otomaatig ah u soo muuqan doona liiska Android, waan xulannaa wayna shaqeysaa adoon dheereynin. Markii aan heesno, waxaa lagu sii deyn doonaa aaladda Android, taas oo ah, telefishankeenna ama qalabkeenna hi-fi ee aan ku xirnay aaladda Android. Xakamaynta nidaamka waxaa laga fulin doonaa aaladda macruufka ama midda 'Android', markii aan dooranno.
Si loo tuuro fiidiyow, Haddii aan daalacno YouTube iyo boggaga kale ee fiidiyowga ah, waxaan ku arki doonnaa astaan ​​buluug ah oo ah 'AirPlay icon' baarka ku meel gaarka ah, markii aad riixeyso, fiidiyaha iyo codka labadaba isla markiiba waxaa lagu sii deyn doonaa qalabka Android, iyadoo aan dib loo dhigin isla markaana isla tayada leh on iPhone.
Hadday tahay waxaan rabno ka eeg aaladdayada Apple shaashadda kaas oo aan ku xirnay aaladda Android, ama kiniinka Android ee aan tixraacno, waxaan si fudud u adeegsanaa badhanka 'Duplication' ee menu-ka AirPlay shaashaduna si toos ah ayey u soo muuqan doontaa waqtiga dhabta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Sida loo AirPlay ka macruufka in Android si fudud
Jose Garcia Gomez dijo
Waxaan u rakibey inaan ka daawado aflaanta iPad-ka oo aan ku rakibo Apple TV mana ii shaqeynayo.
Jawaab José García Gómez
Podcast 7x07: Batacazo waxaa lagu sameeyay Apple